Warshadda Saxanka Birta, Alaab -qeybiyeyaasha - Soo -saareyaasha Saxanka Birta ee Shiinaha
Carbon Steel Plate/Plate siman
Biibiile welded toosan iyo biibiilaha welded muquuninta Q235 A106 ...
API-5L dhexroor Large biibiilaha alxanka welded Oil iyo gaaska ...
Dhejin kulul dhuunta galvanized biibiile bir tuubo dareere cadaadis hoose ...
Xiro saxanka birta u adkaysta / saxan u adkaysta / saxan u adkaysta heerkulka sare ee mashiinka dhismaha
Xiro saxanka birta u adkaysta waa nooc ka mid ah saxan gaar ah oo loo isticmaalo xaaladda duugga ee aagga weyn. Saxanka birta ah ee inta badan la adeegsado wuxuu ka samaysan yahay dhumuc gaar ah oo ah daaha adkaysi u leh u adkaysta oo leh adkaysiga sare iyo iska caabbinta duugga ee dusha sare ee birta kaarboonka hoose ama birta daawaha leh oo leh adayg wanaagsan iyo balaastigga oo dusha sare yaal. Intaa waxaa dheer, waxaa jira saxan bir ah oo u adkaysta kabka iyo daawaha bakhtiiyey saxan birta u adkaysi u leh.
ASTM AISI SUS 201 202 304 316 430 qiimaha saxan birta ah ee birta ah halkii kg
Saxanka birta aan lahayn waa magaca guud ee saxanka birta aan lahayn iyo saxanka birta u adkaysta aashitada, oo leh dusha siman, balaastigga sare, adkaysiga iyo xoogga farsamada, iyo iska caabinta daxalka aashitada, gaaska alkaline, xalka iyo warbaahinta kale. Waa nooc ka mid ah birta daawaha ah oo aan sahal ahayn in la daxalaysto, laakiin aan gabi ahaanba daxalayn. Saxanka birta ah ee birta ah wuxuu loola jeedaa saxanka birta u adkaysta dhexda daciifka ah sida jawiga, uumi iyo biyaha, halka aashitada birta u adkaysta ay tixraacayso saxanka birta u adkaysta dhexda kiimikada daxalka leh sida aashitada, alkaliinta iyo cusbada.